Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:5aad | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:5aad
Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:5aad
FoorenewsNov 18, 2017Aragtida Dadweynaha, Barnaamijo, Sheekooyin, wararka0
Anna aniga oo cadho jiq ah ayaan ugu jawaabay waar waxba ha iga dhaadhicin kuma rabee orod oo iga daba hadh, maxaad iga rabtaa naga hadh oo naga tag. Khalaas, waxa maskaxdayda ka bixi la’ meeshii aan caawa fiidkii hore ka soo tagay ee arooska ahayd sida ay ahayd iyo sida ay u shidnayd. Dadkii aan ka soo tagay ee fannaaniin iyo ka qayb galayaashii arooskaba lahaa iyo sida ay ii doonayeen ee ii rabeen iyo meeshii aan ku sii ordayay sida ay noqotay. Taasaa isku kay qaban wayday oo aan aad ula sii yaabbanaa.
Sida ay taasi u dhacday ayaa ciil iga hayaa. Bal u fiirso meeshii aan ka soo degdegayay iyo meeshii aan ku soo ordayay sida ay u kala duwan yihiin iyo waxa igu dhacay taasaa ciil badani iga hayaa. Gurigayagii markii aan garaacay ayaa la iga furay kadib gudaha ayaan u galay isla markiiba albaabkii ayaan qab ka siiyey oo aan si cadho leh u xidhay. isagoo oo I daba taagan oo doonayay in uu hore ii soo raaco ayaan iska gartay oo albaabkii ayaan qab ku siiyey oo aan xidhay. ninkii ma aqaano muddoda uu meeshii sii taagnaa. Dib umaan soo jalleecin. Sariirta ayaan isku tuuray aniga oo ciil cadho igu gadhoodhay. Laba indhood miyaan isku keenayaa. Bal kaalay adba wax hurdo ahi ha ii timaaddo. Kolba dhinac ayaan isku rogaa. Ha sheegin, hurdo ma jirto kolba feker iyo walaac ayaa isku kay haleela. Kolba sawirka iyo muuqaalkiisa ayaa sidaa ii soo hor mara. Markaasaan baddalmaa oo aan is garan waayaa meel aan joogo. Sawir aan soo wayneeyey oo isagu lahaa oo gidaarka gurigayga aan sudhay ayaan ku kacay oo aan meeshii uu sudhnaa ka jeediyey oo aan xagga dambe ee gidaarka ayaan u sii jeeday anoo diiddan in aan arko sawirkiisa oo aad uga diiqadoonaya. Habeenkaasi waxa ii ahaa habeen aad iigu culus oo aan dhibaato weyn ka mutay sida ninkaasi u dhaqmay ee uu wixii naga dhaxeeyey u baabi’iyey. Waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey ee aan jeclaado ee jacayl na dhex maro. Waxa aan ahaa gabadh yar oo da’yar oo ay u ahayd sheekadii ugu horraysay ee ay nin la yeelato. Maxaase iga gaadhay ee iga qabsaday. Ninkaasi hadda waa joogaa. Markii dambe nasiib aduu waannu is guursanay mar dambe, waxa aanan u dhalay Afar ubad ah, mid ayaa ii nool, saddexdii kale way iga noqdeen. Wiilkii aan isaga u dhalay waxa uu leeyahay shan ubad ah oo uu dhalay oo aan ayeeyo u ahay. Alxamdulillaah aduu waxa ay ahayd wakhti hore oo xusuus badan igu leh oo I soo maray. Ayaamu zamaan!! Ayay carabtu tidhaahdaa. Ninkaasi hadda waxa uu ka shaqeeyaa idaacadda Raadiyow Muqdisho oo waa nin saxafi ah”.
Intaa kadib, Fannaanad Binti Cumar Gacal waxa ay ka hadashay in ninkaasi hore kadib aanay dib dambe nin kale u shukaansan oo aanay wax sheeko ah oo dambe inan rageed la yeelan, iyada oo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tidhi: “Walaal Cumarow (Wariyaha Waraysiga ka qaaday), anigu ninkaasi kadib nin dambe maan shukaansan oo lamaan sheekaysan. Aan sheekadii kuugu noqdee walaal habeenkii oo dhan markii aan sidii isku rogrogayay ayaan subaxdii kacay aniga oo sidii aan ku jiifsaday ku jooga ayaan jiifka ka kacay oo aan soo kacay. Waxa aan tagay gurigii fannaaniinta anoo aad u tabcaansan. Kadib meel gaar ah oo cidlo ah ayaan iska fadhiistay aniga oo dhabanka iyo gacanta isku haya oo dhulka ku foorara. Aadbaan u walaacsanaa oo waxa iga muuqatay sida aan u niyad jabsanahay. Waxa goobtii aan fadhiyay isa soo kay dul taagay Abwaanka caanka ah ee aad wada taqaanaan waa Barre Maxamed Fiidow. Barre Maxamed Fiidow waa Abwaan weyn oo Soomaaliyeed oo caan ah kana mid ahaa abwaannadii waaweynaa ee Fannaaninta qaranka. …..La Soco
Previous PostMa dhabbaa In In Boqor Salmaanka Sucuudigi Toddobaadka Dambe Xilka Ku Wareejinayo Wiilkiisa Maxamed Bin Salmaan? Next PostKomishanka Doorashooyinka Oo Soo Af-jaray Tirintii Codadka Gobolka Saaxil Shir Jaraa'idna Qabtay